Ahoana ny fomba hamoronana lahatsoratra neon amin'ny dingana 5 amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Adobe Photoshop dia manolotra fitaovana fampifangaroana mahatalanjona. Raha hainao ny mampiasa azy ary raha mandinika ny antsipiriany ianao, miaraka amin'izy ireo dia afaka mamorona tsy misy farany vokany tena zava-misy. Amin'ny famolavolana sary, toy ny amin'ny lamaody, miverina ny zava-drehetra ary tamin'ity taona ity dia nanatri-maso ny fomba nanjary fironana indray isika 80-est. Loko manaitra, sary maizina, firafitra samihafa, jiro neon, ireo singa ireo dia nanondraka peta-drindrina sy fanentanana dokam-barotra, ary nitondra antsika niverina tany amin'ny folo taona nandikan-dalàna.
Ny jiro neon dia kilasika tamin'ny dokambarotra tamin'ny valopolo taona, ka te-hamerina azy ireo amin'ity lahatsoratra ity aho. A) Eny, Hasehoko anao ny fomba famoronana lahatsoratra neon amin'ny Adobe Photoshop amin'ny dingana 5 mora.
1 Misafidiana ambadika mety
2 Fisafidianana ny haben'ny endri-tsoratra sy soratra
3 Ovao ny fomban'ny sosona lahatsoratra
4 Ampiharo ny vokatry ny neon
5 Mahazoa zava-misy bebe kokoa
5.1 Safidio ary amboary ny fitaovana borosy
5.2 Makà jiro malefaka
Misafidiana ambadika mety
Na dia marina aza fa azonao ampiharina amin'ny fiaviana maro loko, raha misafidy tontolo maizina ianao dia ho tsara kokoa ny valiny ary ho be loatra ny zava-misy. Azonao atao ny manao azy mivantana amin'ny toerana mainty, na afaka misafidy endrika hafa ianao. Amin'ity tranga ity dia nisafidy ambadika iray aho izay manahafa rindrina biriky mainty ary handeha hiasa amina rakitra A4 habe amin'ny toerana marindrano aho.
Fisafidianana ny haben'ny endri-tsoratra sy soratra
Mba hamoronana ny soratra neon anao Manoro hevitra ny hisafidy endritsoratra matevina aho, mavesatra sy somary lavalava, tsy intsony satria rehefa mampihatra ny vokany dia mety kokoa aminao, fa satria ny maotera matevina dia lamaody be tamin'ny taona 80. habe, hiankina betsaka amin'ny filan'ny volanao io ary ny typeface nofidinao. Na izany aza, mampitandrina anao aho fa tsy natao ho an'ny lahatsoratra kely ity vokatra ity, fa ho an'ny lahatsoratra manintona be. Zavatra iray hafa izay tsy maintsy dinihinao dia ny elanelana misy eo amin'ireo literaRaha misafidy endri-tsoratra izay kely dia kely ity toerana misy anao ity ianao dia tsy maintsy mampitombo azy io. Aza matahotra! Ho hitantsika izao ny fomba hanaovana azy.
Raha ny amiko, Nisafidy ny font «Impact» aho ary nomeko azy a Habe 100 teboka. Raha kely ny elanelana anelanelan'ny endri-tsoratra dia nomeko a sanda 10 rehefa traking. Amin'ny fanovana izany sanda izany dia manova ny elanelana misy eo amin'ny toetra amam-panahy isika.
Mba hanomezana an'io fampifanarahana io amin'ny lahatsoratra fotsiny Nanitsy ny safidy fampifanarahana aho ao amin'ny "menio soratra" izay hita matetika eo an-tampon'ny efijery. Tsy maintsy mifidy «afovoany lahatsoratra». Mba hametrahana azy eo afovoan'ny pejy dia tsindrio ny fifehezana + T (raha miasa amin'ny Windows ianao) na mibaiko ny + T (raha miasa amin'ny Mac ianao) dia azonao afindra malalaka izany.
Ovao ny fomban'ny sosona lahatsoratra
Raha vantany vao nahary ny lahatsoratrao ianao, ny zavatra hataonao dia ampidino ny famenoana 0%. Hanjavona ilay lahatsoratra, nefa aza matahotra, tsy nanao ratsy ianao, fa ny zavatra tokony hitranga ihany.
Manaraka izany, hanohy hatrany isika ovao ny fomban'ny sosona soratra. Ho an'ity dia tsy maintsy ataonao sokafy ny menio style layer: manidina eo ambonin'ny kiheba "layer" dia hanokatra menio mitete ianao, hanidina eo ambonin'ny "style layer" ary tsindrio "fusion options". Hisokatra ny menio, tsy maintsy atao izany safidio ny safidy tapaka lalan-dra ary ovao ireto singa manaraka ireto: ny habeny sy ny loko. Ho an'ny loko mifidy lasibatra. Ho an'ny habe dia tsy afaka manome anao sanda marina aho satria hiankina amin'ny typografikao sy ny karazana endritsoratra voafantina izany. Raha ny amiko dia efa namboariko stroke size in 7, Ny zava-dehibe dia tsy matevina loatra ka tsy ho very ny famakian-teny rehefa manampy effets.
Alohan'ny hanohizana, hamorona vondrona misy ny lahatsoratra sy ny vokany izahay (effet trace). Mba hamoronana ilay vondrona, tsorina Mifidiana ny sosona an-tsoratra ary tsidiho ny baiko + G. Manomboka izao dia hampihatra ny vokatr'izany vondrona izany izahay.
Ampiharo ny vokatry ny neon
Miomàna izao handinika tsara satria manomboka ny zavatra mahaliana indrindra. Misafidy ny «texte group + effets» hataontsika sokafy indray ny menio style layer (Tadidio fa azonao atao ihany koa ny manokatra azy amin'ny fisafidianana ny marika "fx"). Avy eo zahao ny vokany "glow ivelany". Indray mandeha indray, ny sanda homenay ny vokany dia miankina amin'ny filan'ny famolavolana, mampihetsika ny safidy «topi-maso »hahitanao miaraka ny mampiavaka ny toe-javatra. Raha ny amiko dia nisafidy loko mavokely manaitra aho ary nifidy iray 85% opacity. Tsy maintsy misafidy teknika koa ianao, mamporisika anao hisafidy ny safidy "malama" ary hanitsy ny soatoavina "manitatra" sy "refy". Avelako eo ambany ianao a pikantsary miaraka amin'ny soatoavina izay nanompo ahy tamin'ny volavolako.
Mahazoa zava-misy bebe kokoa
Araka ny hitanao, izay efa azontsika dia efa azo raisina ho toy ny soratra neon, fa ny fomba itadiavantsika ny valiny ho azo tanterahina araka izay azo atao dia omeko anao toro-hevitra vitsivitsy hafa hanatsarana ny endrika. Ny lahatsoratra neon tena izy dia manome hazavana Azontsika atao ny manahafana an'io hazavana io amin'ny Photoshop? Eny, mazava ho azy afaka izahay ary ho gaga ianao fa tsotra kely izany.
Safidio ary amboary ny fitaovana borosy
Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataonao dia mamorona sosona vaovao. dia safidio ny fitaovana borosy ary safidio ny tendrony "diffuse circular". Tsy maintsy ampanjifainao ny toetran'ny borosinao. Hanomboka amin'ny fanovana ny habe isika, ny filamatra dia izany ny hatevin'ny tendrony dia somary lehibe kokoa noho izay onenan'ny boaty fandefasanao (Mila omeko sanda 2390 px izany). Tsy maintsy manao izany koa ianao ovay kely ny endrika ny borosy, hanaovana an'io dia hampihetsika ireo teboka fotsy misy ao amin'ny sary misy ny menio borosy, aforeto kely ny faribolana mba hahafahany mampifanaraka ny endrik'ilay lahatsoratrao. Hidina ny opacity, miankina kely amin'ny tsiro manokana an'ny tsirairay izany, tiako fa malefaka ny vokany, ka naidiko ilay 21% opacity. Farany, safidio ny lokon'ny borosy, ny famenoana dia tokony hitovy loko mitovy amin'ny nanomezanao ny jiro ivelany (mavokely amin'ity tranga ity). Mba hitoviana ny loko dia manana safidy roa ianao: azonao atao ny mandika ny kaody nomena na manampy an'io loko io ho santionany amin'ny tranombokinao.
Makà jiro malefaka
Rehefa manana ny borosinao ianao, dia tsy maintsy tsindrio eo afovoan'ny lahatsoratrao handoko teboka. Io teboka io dia efa hanahafana jiro iray, fa mba hahatratrarana vokatra tsara kokoa Manoro hevitra anao aho mba hametraka ilay sosona ao ambanin'ny vondrona "text + effects". Manantena aho fa ity fampianarana momba ny famoronana lahatsoratra neon ity amin'ny dingana 5 miaraka amin'ny Adobe Photoshop dia nanompo anao tsara. Vonona ny hanao an'ity endrika ity ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hamoronana lahatsoratra neon amin'ny dingana 5 amin'ny Adobe Photoshop